साइकल सिटीको रुपमा चिनाउन अभियान्ता सक्रिय – Jagaran
सुर्खेत, १५ असोज (जागरण) । कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई साइकल सिटीको रुपमा चिनाउन अभियान्ता सक्रिय बनेका छन् ।
२०२५ सम्म वीरेन्द्रनगरलाई साइकल तथा पैदलयात्रीमैत्री बनाउनेगरी अभियान्ताको सक्रियता बढेको हो । अभियान्ताको पहलपछि भौतिक विकास मन्त्रालय, सडक विभाग र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले साइकल र पैदलमार्गसम्बन्धी डिपिआर काम अगाडि बढाएका छन् ।
विभिन्न स्थानमा साइकल स्ट्यान्ड र साइकल पार्क बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले डिपिआर थालेका हुन् । साइकल पार्कका लागि कुइनेपानीलाई प्रस्ताव गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि ५० लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरलाई चिनाउनेगरी साइकल सिटी अभियानका लागि अभियान्ताको समूह कर्णाली राइडर्स क्लवले पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । अभियान्ता एवं कर्णाली प्रदेशका मुख्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले साइकल सिटीको रुपमा विकास गर्न वीरेन्द्रनगर उपयुक्त सहर भएको बताउनुभएको छ । भन्डारीले प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीलाई नियमित साइकल प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्ला अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकविहीन
स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर््याउः नागरिक (अडियोसहित)
बढ्दो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारका कस्ता छन् रणनिती ? (अन्तरवार्ता)
वीरेन्द्रनगरको नगर सभा तथा विधेयक अधिवेशन आजदेखि
म.प. विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी भाषा विज्ञ आउँदै